निर्वाचनमा धेरैले मतदान गर्न नपाउँने, को–को बन्दैछन् मतदानबाट बञ्चित ? - SangaloKhabar
निर्वाचनमा धेरैले मतदान गर्न नपाउँने, को–को बन्दैछन् मतदानबाट बञ्चित ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै नेपाली मतदानबाट बञ्चित हुँदै छन् । जो जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले यो निर्वाचनमा समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद सुवेदीले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुँदै छ । ३१ वैशाखमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । तर, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा निजामति कर्मचारी करिब एक लाखको हाराहारीमा खटिँदै छन् । एक मतदान केन्द्रमा पाँच कर्मचारी खटिने र मतदाताको संख्यालाई हेरी केही थप हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यसरी निर्वाचनमा परिचालित हुने कर्मचारीले मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
निर्वाचनमा पहिलो घेराको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचनमा नखटिने सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछैन । त्यस्तै निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका ७५ हजार म्यादी प्रहरी पनि मतदानबाट बञ्चित हुने आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २८, २०७४ समय: ८:३५:५८